Why Choose PAL - Pal
Why Choose PAL
To be world renowned, strongest and most trusted land, air & sea freight forwarding Company.
Our mission is to strive to meet customer’s needs in on time delivery, cost effectiveness, quality services that results in customer satisfaction.
Our goal and commitment is to provide each of our customers with the best value inawide range of confidentially and professionally program managed freight forwarding, transportation, warehousing and provisioning services while meeting the most demanding expectations of our customers and their markets.
2008 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, PAL လိုင်း Pte Ltd သည်လေထု & ပင်လယ်ကုန်တင် forwarding ကို, သိုလှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်အထူးပြုတစ်ဦးတည်း-stop service providerကဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေကျွန်တော်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအာရှတလွှားတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးချဲ့မြန်မာနှင့်တရုတ်နိုင်ငံများကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကုန်များဆက်လက်လွှဲပြောင်းတင်ပို့အချက်အချာအဖြစ်စင်္ကာပူရဲ့ကောင်းမွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆိပ်ကမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပထဝီတည်နေရာအားသာချက်ယူကြပြီ။ စံမှတဆင့်ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အသွေးအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အာရုံစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မာနထောင်လွှားကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအများကလေးစားဖောက်သည်ပေးဆက်ပြောသည်တန်ဖိုး၌တည်ရှိ၏။
PAL လိုင်း Pte Ltd မှတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
PAL ကွန်တိန်နာလိုင်း Pte Ltd မှတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
PAL Myanmar Co., Ltd ကိုထူထောင်ခဲ့သည်
PAL စင်္ကာပူမှာသူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းကိုသာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအေးဂျင့်အဖြစ်သြစတြေးလျအမျိုးသား Lines (ANL ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး) ကခန့်အပ်ခဲ့သည်
စက်တင်ဘာလ 2014 ခုနှစ်
PAL လိုင်း Pte Ltd မှပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝတ်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂိုဒေါင်ဝယ်ယူ
8 Ubi Rd 2, #05-24 Zervex,Singapore 408538
© Copyright 2017 - Bthrust